मेरो गाऊँ, सानो ‘म’ र मैले देखेको माओवादी « Emakalu Online
२०५५/५६ तिरकाे कुरा । घाम उदाउनु अघि नै १२ जना जति प्रहरीहरूले छिमेकी माैलिम्पाकाे घर घेरिसकेछन् । गाऊँघर हाे, छिमेक वरिपरि एकैछिनमा हल्ला फैलिसकेछ । त्याे घर भित्र अहिले पूर्वमन्त्री गाेपाल किराती त्याे बेला गाेपाल खम्बु भनेर चिनिन्थयाे। खम्बु छन् रे घरभित्र उसैलाई समाउन बसेका रे! ती बन्दुकधारी प्रहरीहरू । शायद २०५५साल तिर हुनुपर्छ ।
छिमेकी सबै एकप्रकारकाे डर र त्रसमा । त्यसपछि के हाेला ?? ती गाेपाल खम्बु भन्ने मान्छेलाई पुलिसले हामी सबैका अगाडी गाेली ठाेक्लान् वा बाँधेर लग्लान्, खासखुस् बढ्दै गयाे । किनभने रेडियाे नेपालमा अातंककारी माअाेवादीलाई पुलिसले मार्छ भन्ने सुनिएकाे थियाे । त्याे बेला गाेपाल खम्बु ‘माअाेवादी’ नभएपनि ‘खम्बुवान र माअाेवादी’ काे नारा उस्तै छ त्यसकारण प्रहरीले मार्छन् भन्थे गाऊँका अगुवाहरू ।
कट्टु लाउने उमेर नपुगेका हामी बच्चाहरू त्याे दिन अबेर सम्म घर बाहिर निस्केनाै । साँझ परेपछि भने प्रहरीहरू फर्के । परहरीले भेटेनन् गाेपाल खम्बुलाई । तर गाऊँलेहरूले गाेपाल किरातीलाई राति त्यहीँ घरबाट निकालेर देवीथान कटाउन सहयाेग गरे । पछि सुनियाे अन्नकाे भण्डार भित्र लुकेका थिए रे गाेपाल खम्बु । अचम्म बिहानदेखि बेलुका सम्म सासै फेरेनन् ? कि अरू पनि फेरे ?? बच्चा बेलाकाे साेँच त हाे । अघिल्लाे रात टाेलमा मिटिङ राखेका रहेछन् । गाऊँलेहरू भन्थे – गाेपाल खम्बु कति धेरै कुरा जान्ने, बुझ्ने साँच्चै उनले भने जस्ताे भयाे भने जिल्ला गएर नागरिकता बनाउन हप्ता दश दिन लाग्दैन हाेला, सिडिअाे काे हप्काई खानुपर्दैन हाेला ।
खम्बुलाई त त्याे दिन भगाईए । तर रातारात गाऊँका गल्ली, गल्ली वरिपरि ढुंगाहरू गुलाब झै फुल्न थाले राता अक्षहरूले :-
– खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमाेर्चा – जिन्दावाद ।
– किरात वर्कर्श पार्टी – जिनदावाद – जिन्दावाद ।
– सामन्तवाद – मूर्दावाद ।
– शाेषक सामन्ति – हाेसियाेर ।
पछि खबर अायाे । खम्बुवान र माअाेवादी मिल्याे रे ! फेरि ती ढंुगा संगै सरकारी भवन र घरका भित्ताहरूमा समेत नाराहरू थपिन थाले ।
– नेकपा माअाेवादी – जिन्दावाद ।
-गणतन्त्र -जिन्दावाद ।
– प्रचण्डपथ – जिनदावाद ।
– जातिय पहिचान सहितकाे संघीयता – जिन्दावाद ।
– भारतीय बिस्तारवाद – मूर्दावाद ।
– राजतन्त्र मूर्दावाद – मूर्दावाद ।
-जातिय स्वयत्त क्षेत्र/शासन ।
– सुराकी – हाेसियार ।
मार्क्सवाद, लेनीनवाद, माअाेवाद ।
बर्गसंघर्ष, मुक्ति, जातियता-बर्गियता, पहिचानकाे अान्दाेलन, महिला, दलित, अादिबासी जनजाति, मधेशी, उत्पिडित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक ………… जस्ता ढंुगामा रातारात फुलेका शब्दहरू गहिराइकाे अर्थ मैले बुझ्नसक्ने कुरै भएन बल्ल अक्षर गाँस्दै अक्मकिदै पढ्न सक्नेले । तर याे शब्दकाे अर्थ मेराे अभिभावकलाई पनि
थाहाँ रहेनछ भन्ने बिस्तार बुझेँ ।
ठाउँठाउँमा माअाेवादी र पुलिसकाे भीडन्त भएकाे कुरा गाऊँमा समाचार सुन्न जान्नेले सुनाउँथे । अान्दाेलन चर्किदै गएपछि डरले हाेला ती गाेपाल दाइलाई घेर्ने प्रहरीहरू पनि चाैकी गाऊँछाेडेरे हिडे । २०५७ तिर हाेला पहिलाेपटक देखिने गरी दिउँसै गाऊँ छिर्याे भरूवा बन्दुक र कम्मरमा खुकुरी बाेकेका माअाेवादी सयाैंकाे संख्यामा । अार्मी जस्तै तर अलि गाढा ड्रेस । राताे क्याप, पाखुरामा रातै फेता । १ घण्टा भित्रै भत्काइदियाे प्रहरीचाैकी भवन । अातंककारी भनिएकाे माअाेवादी त अात्मियता जनाउने साईनाे बुबा , अामा, दाजु भाइ भन्दै पाे अाए । पर्चा बाँडिए, बिद्यालका भित्तामा टाँसिए, राताे अक्षरले लेखिए पनि – माअाेवाद – जिन्दावाद !!! लाम सलाम ! सम्बाेधनमा कम्रेड ।
अब गाेपाल किराती भन्दा प्रचण्ड र बाबुराम सुनाईन थालियाे । टाेल टाेलमा मिटिङ राखिए । हली, काेदाली सबै अाए । काङग्रसीहरू बढी डराउदै अाए, एमाले कम डराउँदै अाए सबै अाए । तर अलि टाेलमा अलि पहुँचवालाे भने राति नै परिवर सहित शहर अाए ।
शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी सित पैसाकाे माग र गाऊँलेहरू संग गाँस बास कपासकाे व्यवस्था गर्न भनियाे । भन्थे सट्टामा हामी सबैकाे मूहार फेरिनेछ । भनेबमाजिम व्यवस्था भयाे । घरघरबाट कम्बल, काेदाे , मकै, गहुँ, अालु हुनेले पाथी नहुनेले फाम) ।
देवीथान माथिकाे मैदान (दिरित्ती) मा ट्रेनीङ सेन्टर बनाउे रे ! अगुवाहरू चिन्तित भए । त्याे बेला त सेना समेत परिचालन भईसकेकाे रहेछ । सेनाले अाकाशबाट बम खसालेर गाऊँलाई नै गाऊँ नै ध्वस्त बनाईदिन्छ । तर सुराकी – हाेसियार भन्ने भित्ताकाे नाराले झस्काउथ्याे । राज्य र अानदालनकारी दुबै तर्फबाट बेला बेला बेकसुर मानिस मारिने पनि समाचार प्रशस्तै सुनिन्थ्याे । अघिल्लाे दिन जाँड खाएर स्वास्नी कुट्ने छिमेकीलाई सबैका अगाडि सुम्ला उठनेगरी माअाेवादीले कुटेका थिए । चाेकमा तास खेल्नेलाई तासै पनि खुवाए रे! यता डर उता डर । खेतबारीमा कामका लागि निस्केका परिवारका सदस्य सकुशल फिर्ने हुन कि नाई ? दैनिकी …………
हप्ता दिनमै बन्याे तालिम केन्द्र । उता बाेक्खर्दाेबाट हेर्दा Z माथि दुर्याकाेमबाट हर्दा N अाकारकाे सुरूङ । ठाउँठाउँमा खाल्डाे। खाल्डाे त घरघरमै पनि खन्न लगाइयने । नखन्नेलार्इ कार्बाही हुनेरे! खनियाे । देवीथान छेवैकाे पाेखरी माथि २ तिर पाेलमा डाेरी टाँगियाे । हामी बच्चाहरू पनि खुब रमायाैं । माअाेवादीले सकेपछि बिहान बेलुकी हामी पनि उनीहरू तालिम केन्द्रमा सिकिन्थ्याे । कुईनाले टेकेर सुरूङभित्र शरिर घिसार्नुपर्ने १ छेऊबाट अर्काे छेऊ पुग्न 20 मिनेट लाग्थ्याे । पाेखरी माथिकाे डाेरीमा झुणणडेर वारपार लाउनुपर्ने एक दिन साथी पाखेरीमा खसे । त्यति गहिराे रहेनछ बरू पानी भित्रकाे गहिराे हिलाेले गर्दा बाहिर निस्कन नसकेछि माअावादीलेनै निकाले । तर भनेनन् – अबदेखि यसरी नखेल । अहिले लाग्छ हामी खेलिरहेकाे बेला सेना अाकाश वा जमिन जताबाटै भएपनि अाईपुगेकाे भए ????
तालिम केन्द्र निर्माण गर्दा प्रयाेग भएका काँठहरू त्यहीँ देवीथान काे जंगलभित्रबाटै काटिएका थिए । याे गाऊँलेका लागि चित्तदुखाईकाे बिषय थियाे । किनभने बस्तीसंगै जाेडिएकाे एकमात्र जंगल जहाँकाे जंगल मास्नुहुन्न, देवीथानकाे संरक्षण गर्नुपर्छ, बरू बाेटबिरूवा थप्नुपर्छ, त्यहाँ चाेरी शिकार गर्नुहुन्न । र गरिहालिएमा गर्नेकै हानी हुन्छ भन्ने मान्यता थियाे र छ । मेराे बज्यै गांगाम्माले एकदिन याे कुरा गर्दा ‘अन्धबिश्वास’ भनेका थिए उनीहरूले । नभन्दै गाऊँकाे तालिम सकेर अाेखलढुंगाकाे रूम्जाटार अाक्रम गर्न गर्न गएका त्यहीँ टिमका थुप्रै कमेरेडहरू ले ज्यान गुमाएका खबर मेराे बज्यैकाे चाहिँ अक्कलकाे जित भयाे । वहाँ अाफ्नाे बचन नमानेकाले माअावादीले त्यस घटनामा जित हासिल नगरेकाे धेरैलाई सुनाउनुहुन्थ्याे ।
पछि गाऊँका बिद्यालयमा ९ र १० कक्षाका बिद्यार्थीहरूलाई माअावादीले केहिँदिनका लागि भन्दै कता लगे ? किन लगे ? गाऊँलेहरू अब कि त माअावादी नै बन्छन्, नभए फर्केछि सेनाले बसिखान नदिने भए भन्थे। हप्तादन पछि फर्काईयाे । पछि त्यहीँमध्येकै २ जना दाइहरू १ जना नेपाल अार्मी १ जना शसस्त्र प्रहरीमा जानुभाे ।
चहपहल झनझन बढ्दै गयाे। दिउँसै सार्बजनिक स्थलहरूमा अासभा हुन थाले । कुरा मिठा मसिना । सबैजसाेले पत्याए । कतिले डरले जबरजस्ति पनि पत्याए । जे हाेस समानताका लागि चेतनाकाे बिकास हुँदैछ भन्थे । गाऊँगाऊँ बाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ याे देशकाे मूहार फेर्नलाई उठ – त्यसबेला चर्चित जनबादी गित ।
२०५८/५९ तिर हुनुपर्छ । एक हुल सेना अाए । सबै बन्दुक बाेकेका । घरघरमा छान मार्न थाले । माअाेवादी छ कि ? माथिल्लाे तल्लामा हेर्न जाम भनेर तल्ला उक्लिन लगागएका छिमेकी काकीले माथिल्लाे तल्लाकाे झ्यालबाटै चिच्यादै हाम फाले । काका बिदेशमा थिए । सेनाले बलात्कार गर्न खाेजेकाेले झ्यालबाटै हाम फालेका टाेलमा चर्चा चल्याे । हाम्रै घरमा पनि अाए सेना । घरमा पहिले माअाेवादी पनि बसेका थिए । र फलामका डल्ला छाेडेका थिए । बम भन्थे मानिसहरू एका पट्टिका टेप उक्काएर फालियाे भने पड्किन्छ भन्थे । सेनाले भेटेन तर । खिया लाग्दै रहेछ । निकै पछि गाेबिन र मैले गाेक्तुलुकाे ढुङ्गाघारी भित्र फाल्याैं । तर पड्केन शायद बिग्रेकाे वा date expired थियाे हाेला ।
माअाेवादीले छाडेका पुस्तकहरू सेनाले भेटे । तुयसपछि मामा साइलालार्इ साथमा लाने भए । बज्यैले भन्नुभाे – मेराे छाेराे हाेइन मलार्इ लानु भन्नुभाे । समाचारमा भनिएकाे थियाे यसरी नै अपहरण गरेर मारिन्छ । बज्यै सेनाकाे अगाडि तेर्सिदै पहिले ७० बर्षकाे म बुढीमालार्इ गाेली ठाेक्नुस् अनि मेराे साइलालार्इ मात्र हाेर्इन सबै छाेराछाेरी नातिनातिना सबलाई लानु भन्दै त्यसअघि अाफ्नाै पनि परिवारकाे सम्झना गर्न सुझाउनु भाे । फर्किए सेना रित्तै ।
२०६२/६३ जन अान्दाेलन, ५ मंसिर २०६३ बिस्तृत शान्ति सम्झाैता, अन्तरिम संबिधान २०६३ – (लाेकतन्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समाबेशी, समानुपातिक……… ) यसैलाई संस्थागत गर्न तथा अन्य थुप्रै कुराहरूकाे लागि २०६४ सालकाे संबिधान सभाकाे निर्बाचनमा माअाेवादीलाई जिताउनु पर्छ रे ! चल्याै जनलहर । काका भन्नुहुन्थ्याे – ऋण पनि तिर्नु नपर्ने भाे । गाऊँका दलितहरू खुशी थिए – जस्काे जाेत उस्कै पाेत अधिया खेती गर्नै नपर्ने ।
चुनावकाे दिन बेलुका दिदीकाे पनि बुढी अाैंलामा नीलाे मसी । भाेट दिन उमेरै नपुगेकि दिदी फुर्ति लाउँदै थिईन् । ५ भाेट त मैले पनि दिए गाेपाल किरातीलाई । मैले नपत्याएकाे थाहाँपाएपछि थपिन् । कतिले त १३/१४ भाेट पनि हाले । भाेलिपल्ट गाइँगुइँ चल्न थाल्याे बुथ कब्जा गरेर मतदाता नामावली हेर्दै उपस्थित जतिले सबकाे नाममा भाेट ठाेकेछन् । खै त्यसैले हाे कि ? संबिधान सभा मर्याे रे! २०७० फेरि दाेस्राे चुनाव हुने रे !
अब बिस्तार राजनितिप्रति चासाे जाग्याे । सुधीर शर्माले लेख्नुभएकाे ‘प्रयाेगशाला’ पढेपछि थाहा भयाे – भारतीय बिस्तारबाद – मुर्दावाद भनेर लेख्न लगाउने कम्रेड प्रचण्ड र बावुराम कम्रेडहरू त दिल्लीका गल्लीहरूमा नै लुक्दारहेछन् त्यतिबेला । त्यतिमात्र हाेईन संरक्षण पनि पाउदा रहेछन् ।
भन्न मन लाग्याे -भारतीय बिस्तारबाद – no मुर्दावाद ।
भारतीय बिस्तारवाद – लम्पसारवाद ।
नारा पनि छेटिन थाले –
– जातिय पहिचान सहितकाे संघीयता ।
– पहिचान सहितकाे संघीयत ।
– संघीयता ।
बर्तमान प्रम ज्यू त संघीयता शब्दकाे उच्चाहरण पनि भारीपर्ने गरी गर्नुहुन्छ ।
उता परिवर्तन भयाे, मुहार पनि फेरियाे किनभने हुँदा खानेहरू हुनेखाने भए । ख्याउँते अनुहार टम्म भरिए । अझ दिन पुग्ने पनि भए । यता भने बैशमा माअाेवादी सिपाही रहेकाे थाम शंकर दाजु पिँडुलामा गाेलीकाे छर्रा बाेकेर अझै अधिया खेत जाेतिरहेका छन् भकाईएका काल्पनिक सपनाहरू हिलाेले पाेतिरहेका छन् , घाेटिरहेका छन् ।
रक्सी खानेलाई गाऊँमा कुट्ने उ बेलाका सज्जन माअाेवादी सदरमुकाममा दिउँसै लठ्ठिएकाे देखियाे । तास खुवाउनेले नै खेलेका पनि देखियाे । भ्रष्टाचार गर्नु हुन्न भन्थ्याे, त्याे मान्छेलाई पत्याइयाे पनि । ईमान्दारै लाग्थ्याे । वाकुतिरकाे जलबिद्युतमा अनियमितताकाे अाराेप संगै गुमनाम भए – ती कमाण्डर पनि । जसलाई साँच्चीकैकाे विश्वास गर्थे गाउँलेहरू । राताम्य ढुंगाहरू पनि अाफ्नै रंगमा फर्के । मेटिए रातै फुलेका नाराहरू ।
नाेट: अाग्रह पूर्वाग्रह केही छैन । घटनाकाे मिति र प्रसंग तलमाथि हुनसकसछन् । धमिलाे बाल सम्झना हाे । सच्यार्इ दिनुहुने प्रति धन्यवाद ।
सोलुखुम्बु जिल्ला महाकुलुङ गाउँपालिकाका लेखक कुलुङ हाल बैदेशीक रोजगारीको क्रममा दक्षिण कोरियामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।